दाजु-भाईले दिदि-बहिनी नै विवाह गरेर घर ल्याए,रातको १ बजे जे भयो थाहा पाउँने जो कोही चकित! – Krazy NepaL
May 24, 2021 565
काठमाडौं । विवाहलाई लिएर एक भयावह घटना घटेको छ । जसले गाउँ नै स्तब्ध बनेको छ । भारत, उत्तर प्रदेश आगराको ताज शहरबाट एउटा स्तब्ध पार्ने समाचार आएको कुरा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा आएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार दुई जना दाजुभाइले दुई जना बहिनीलाई विवाह गरेका थिए ।
भएको के भने विवाह भएको राति नै ति दुई दुलहीले गर गहना लिएर फरार भएका हुन् । विवाहको पहिलो रात सुरु हुनुभन्दा ठीक अघि शौचालय जाने बहानामा फिल्मी स्टाइलमा गहना–रूपैयाँ लिएर फरार भएको खुल्न आएको छ । दुलही खोज्दा सुराकसम्म पनि फेला नपारेपछि केटाहरुसहित सिंगो परिवार निराश छ ।
जानकारी अनुसार दुबै दुलहीको माइतीबाट विदा भएर आएको तीन घण्टा पछि बाह प्रहरी चौकी क्षेत्रमा रहेको फेरेरा गाउँ पुगेर फरार भएको खुल्न आएको छ । बाह प्रहरी चौकी क्षेत्रको फेरेरा गाउँ निवासी दुई भाइको बिहीबार सोनभद्रकी दुई दिदीबहिनीसँग विवाह भएको थियो ।
राति ११ बजे तिर बिहे पूरा भयो । त्यसपछि माइतीले दुई छोरी दिएर विदा गर्दिएका थिए । आरोप छ कि दुलहीको भाइले पनि विवाहको लागि एक लाख ६० हजार रूपैयाँ लिएका थिए । रातको एक बजे दुबै दुलहीहरु आफ्नो भर्खर बनेको नयाँ घर अर्थात श्रीमानको घरमा पुगेका थिए ।
Prevकाठमाडौ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता थप गर्ने तयारी
Nextकोरोना अन्त्य बारे WHO ले दियो यस्तो खुसिको खबर हेर्नुहोस्
मुलुकभर ९ हजार ४८३ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, २२५ को मृत्यु
अदालतको फैसला पछि प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो प्रतिकृया
कपाल लामो बनाउन चाहनुहुन्छ छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
पहिलो भेटमा पुरुषले ख्याल गर्छन महिलाको यी अं’ग…
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (42762)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (22505)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (17568)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (15029)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (13075)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (12447)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (11829)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (11758)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (11633)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (11157)
४ दिन सम्म बिहान खाली पेटमा एक पोटी लसुन चपाउने गर्नुहोस् यस्ता गज्जबको फाईदा पाउनुहोस !
मासुमा भन्दा बढी प्रोटिन हुन्छ बहुगुणी झुसे करेलामा, यस्ता छन् अपत्यारिला फाइदाहरु-:
यी ३ समस्या भएकाहरुले भुलेरपनि नखानुहोस् ओखर
यी ४ राशि भएकाले कमाउँछन् धन, तपाईंको कुन राशि ?